The Rohingya News Bank : MSF
Labels: 1992-2014, 2021, en, MSF, Report, Rohingya
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ပထမဆုံး ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် သေဆုံး
ကုတုပလောင်တွင် ကုတင် ၅၀ ဆန့် ကုသရေးစခန်းတခုနှင့် ယူခီယာတွင် ၁၄၅ ကုတင်ဆန့် ကုသရေး စခန်းတခု UNHCR က ဖွင့်ထားသည်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကော့ဗဇားရှိဆေးရုံတခုတွင် တနင်္ဂနွေနေ့က သေဆုံးသော အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူ တဦး၏ ဓါတ်ခွဲခန်းနမူနာတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိကြောင်း ဒေသခံအရာရှိများ၏ အဆိုအရ တနင်္လာ နေ့က သိရသည်။ လူဦးရေးထူထပ်သည့် ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီးရန် အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုလည်း ထိုအရာရှိများပြောသည်။
Labels: 2020, Article, Covid-19, mm, MSF, ဒုက္ခသည်စခန်း, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ဆောင်းပါး, သေဆုံး
MSF: Conditions in Rohingya camps remain precarious Dhaka Tribune
A predominantly Muslim ethnic minority from Rakhine in Buddhist Myanmar, the Rohingya have been called the “most persecuted minority in the world”.
Stripped of citizenship undera1982 law which deemed the Rohingya as Bengali, they now find themselves stateless.
Myanmar and Bangladesh refuse to acknowledge them as citizens.
Labels: 2019, en, Genocide, MSF, News, Rohingya, Rohingya Camp
မြန်မာဌာန | သတင်းများ ရခိုင်က စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်တွေကို အကူအညီပေးခွင့်ပြုဖို့ MSF အဖွဲ့ တောင်းဆို
မောင်တောမြို့နယ်က စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကို မောင်တောအရေးပေါ် ကူညီထောက်ပံ့ရေးကော်မတီက ကူညီပေးနေစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ တိမ်းရှောင်နေရ တာတွေ အပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းနဲ့ အရေးပေါ် အကူအညီလိုအပ်တဲ့သူတွေကို ကူညီနိုင်ရေး ခွင့်ပြုဖို့ အစိုးရထံ ခွင့်တောင်း ထားကြောင်း နယ်စည်းမထားဆရာဝန်များအဖွဲ့ MSF က ဒီနေ့ထုတ်ပြန်လိုက် ပါ တယ်။ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ တပ်မတော်နဲ့ AA ရခိုင်တပ်မတော်တို့အကြား ဖြစ်ပွားနေတဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိ ပက္ခတွေကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် နေရာအနှံ့အပြားမှာ နေရပ်စွန့်ခွာ တိမ်းရှောင်ရတာတွေကြောင့် အရေး ပေါ် အကူအညီလိုအပ်နေ သူတွေကို ကူညီဖို့ MSF အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ စစ်တွေနဲ့ မောင်တောမှာ အဆင်သင့်ရှိ နေကြောင်း ပါရှိပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, MSF, ရခိုင်, ရခိုင် တပ်မတော်, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်အရေး ICC စုံစမ်းစစ်ဆေး ခွင့်ပြုဖို့ ရှေ့နေချုပ် လျှောက်ထား
( 13-04-2018 ) ICC ရှေ့နေချုပ် Fatou Bensouda
ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက် မောင်းထုတ်ခံရတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ပတ်သက် ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာခုံရုံး ICC က စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်ပြုဖို့ ICC ရှေ့နေချုပ် Fatou Bensouda က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2018, AI, HRW, ICC, mm, MSF, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
179- MSF- 10 Years for Rohingya in Bangladesh
Labels: Book, en, MSF, MSF- 10 Years for Rohingya in Bangladesh, Report